Suzuki Myanmar | Way of Life ! သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် Suzuki ကားစက်ရုံအသစ် တည်ဆောက်မည် - Suzuki Myanmar
Suzuki Motor Corporation သည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေး ဇုန်တွင် Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd အဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး SKD စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်၍ ပြည်တွင်းတွင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိရာမှ CKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်ရန် Welding Process, Painting Process နှင့် Assembly Process တို့ပါဝင်သည့် စက်ရုံအသစ်ကို တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
Suzuki အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်လာခြင်းနှင့်အညီ စက်ရုံသစ်ကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်လည်ပတ်ရန် ရည်မှန်းထား ပြီး နှစ်စဉ် ကားအစီးရေ ၄၀,၀၀၀ ခန့်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Suzuki သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကာလရှည်ကြာစွာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်များကို အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်အဖြစ် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ရောင်းချခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းနောက်တွင် Suzuki (Myanmar) Motor Co.,Ltd နှင့် Suzuki Thilawa Motor Co.,Ltd တို့အဖြစ် ရာနှုန်းပြည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ လက်ရှိတွင် တောင်ဒဂုံစက်ရုံနှင့် သီလဝါ စက်ရုံတို့တွင် Carry, Ciaz, Ertiga နှင့် Swift ကားအမျိုးအစားများကို ထုတ်လုပ်နေသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကားအစီးရေ ၁၃,၃၀၀ စီးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ ယခင်နှစ်ထက် ၁၂၅% တိုးတက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကားသစ်ရောင်းချမှုတွင် စျေးကွက်ရှယ်ယာ ၆၀.၃% ရရှိခဲ့ပြီး အစီးရေ ၁၃,၂၀၆ စီးကို ရောင်းချနိုင်ခဲ့ရာ ယခင်နှစ်ထက် ၁၂၈% တိုးတက်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Suzuki သည် ယခုစက်ရုံသစ်ကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဆက်လက်ကြီးထွားလာရန် မျှော်မှန်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ မော်တော်ကားဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်။
<Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd ၏ အချက်အလက်များ>
လုပ်ငန်းတည်နေရာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ ရန်ကုန်
မြေအကျယ်အ၀န်း စတုရန်းမီတာ ၂၀၀,၀၀၀
အဆောက်အဦး ဧရိယာ (လက်ရှိစက်ရုံ / စက်ရုံသစ်) စတုရန်းမီတာ ၄,၀၀၀/စတုရန်းမီတာ ၄၂,၀၀၀
စက်ရုံသစ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ ဂျပန်ယန်းငွေ ၁၂ ဘီလီယံ
တာဝန်ခံ Mr Keiichi Asano
လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ သန်း ( Suzuki ၏ ၁၀၀% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု )
၀န်ထမ်းအရေအတွက် ၂၂၄ ဦး ( ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ စာရင်းအရ )
Copyright Suzuki Myanmar. All right Reserved